Soo dejisan Quicknote 5.5 – Vessoft
WindowsXafiiskaQoraalada iyo JadwalkaQuicknote
Bogga rasmiga ah: Quicknote
Quicknote – buug xasuus qor ah si aad u qorto qoraallada, hawlaha muhiimka ah ama dhacdooyinka jadwalka oo aad ku xasuusiso iyaga wakhti go’an. Software-kani wuxuu ku deeqayaa inuu qoro fikradaha ama sawir yar oo sawir ah iyo keydinta qoraalka hadda ku jira qaybta ku habboon. Quicknote wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto tirada lagama maarmaanka ah ee qaybaha iyo qoraalada degdegga ah ee aad kala soocaysid, tirtiri karto ama tirtiri kartid sida loo rabo. Software wuxuu taageertaa shaqooyinka asaasiga ah sida nuqul, gaaban ama scan iyo qalab dheeri ah oo lagu keydiyo qoraallada qarsoodiga ah, u dir qoraalada internetka oo kor u akhri qoraalka. Quicknote waxay awood u leedahay inay isticmaasho hawsha si ay u raadiso ereyada muhiimka ah iyada oo la tixgelinayo kiisaska cayaaraha iyo hadallada joogtada ah. Quicknote waxay ku jirtaa habdhismeed-kaas oo kuu ogolaanaya inaad xasuusiso qoraallada la soo xulay oo aad kumbuyuutarka ku shubto wakhti go’an.
Abuuritaanka qaybo badan iyo qoraalo
Raadi hal ama dhamaan qoraalada
Qalabka xusuusinta xoog leh
Soo dejisan Quicknote
Faallo ku saabsan Quicknote
Quicknote Xirfadaha la xiriira